मैले चिनेका शिवकुमार शर्मा
बिहीबार, माघ ६, २०७८ ०९:५७:५९
बुधबार, पुस २१, २०७८ कखरा संवाददाता
२०३८ साल माघ महिनामा दिएको एस.एल.सी. परीक्षाको रिजल्ट २०३९ श्रावणमा प्रकाशित भएको थियो । एस.एल.सी. पासकोे मार्कसिट प्राप्त भएपछि म २०३९ साल भाद्र २४ गते आठबीसकोटको हिमालय निमावि दाँजेमा प्रावि तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति लिई शिक्षण पेसामा जोडिन पुगेँ । विद्यालयले असोजको पहिलो हप्तातिर भाद्र महिनाको मासिक प्रतिवेदन र मेरो नियुक्तिको जानकारी पत्र बुझाउन जिल्ला शिक्षा निरीक्षकको कार्यालय खलंगामा खटाई पठायो । जीवनको पहिलो पटक जागिर पाएको र पत्र बुझाउन पनि पहिलो पटक नै शिक्षा कार्यालय जानुपर्दा मलाई अर्कै कौतुहलता बढेको थियो । जब म कार्यालयमा पुगेँ कार्यालय भवनको प्राङ्गण अगाडि एउटा मेचमा बसेका छोटो र मोटो कदका अनुहार हिसिक्क परेको व्यक्ति देखेकाले उनलाई विद्यालयका पत्रहरु बुझाएँ । पत्र हेरिसकेपछि उहाँले दर्ताकोठा सिकाइदिनु भयो । दर्ता गरिसकेपछि फर्कदै गर्दा मलाई बोलाएर मेरो बारेमा सामान्य जानकारी लिनुभयो । पछि थाहा पाएँ, उहाँ प्रा.वि.नि. शिवकुमार शर्मा हुनुहुँदो रहेछ । जब म २०४० साल असारमा प्रा.वि. तहमा स्थायी भई मोराबाङ सिमा स्थित शहीद शुक्र नि.मा.वि. सिमामा सिफारिस भई पदस्थापना भएँ । प्र.अ.को समेत जिम्मेवारी लिँदै गर्दा उहाँ प्रा.वि.नि. भएको नाताले उहाँसँग झन् नजिक रही काम गर्ने अवसर मिल्यो । उहाँले शिक्षा ऐन, शिक्षा सम्बन्धी नीतिगत कुराहरुमा सरसल्लाह र सुझाब दिने गर्नुहुन्थ्यो । २०५५ वैशाखमा यमुना बाबाबाट दिक्षित चेलाहरु होमजङ्ग मल्ल,टोपजङ्ग मल्ल,स्कन्द शर्मा,दिपेन्द्र बहादुर मल्ल,इन्द्र बहादुर मल्ल,इन्द्रलाल शर्मा ,शशिराम गौतम लगायतका सेरीगाउँका अग्रजहरुले स्थापना गरेको र उहाँ नै संस्थापक प्रधानाध्यापक भएको २०१६ चैत्र १६ मा स्थापित सेरीगाउँ स्थित यमुना पाठशाला हालको यमुनानन्द नमुना माध्यमिक विद्यालय सेरीगाउँमा सरुवा भई आएँ र प्र.अ.को समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा र उहाँकै जन्मथलो र कर्मथलो सेरीगाउँमा हालसम्म बस्दै गर्दा उहाँ बारे धेरै जान्ने अवसर मिल्यो । त्यसैले मैले उहाँलाई यसरी चिन्ने र जान्ने गरेको छुः
शिवकुमार शर्मा दाहाल कुलवंशी बुबा धनेश्वर उपाध्याय र आमा कमलादेवी उपाध्यायको कोखबाट जन्म लिएका जेठा छोरा हुनुहुन्छ । उहाँको पुख्यौली घर रोल्पा थुनी बाघमारा भएपनि उहाँको जन्मघर र कर्मघर मुसिकोट सेरीगाउँमा नै पर्दछ । उहाँको जन्म वि.सं.१९९३ जेठ १९ गते भएको हो । हाल उहाँ बाँके कोहलपुर नगरपालिका वडा नं.१० विद्यानगरमा बसोबास गर्दै आउनुभएको छ । उहाँका दुई भाइहरु र चार दिदी बहिनीहरु हुन् । उहाँले वि.सं. २०१० सालमा १७ वर्षको उमेरमा सल्यान कालागाउँकी १० वर्षीय इन्दिरा शर्मासँग विवाह गर्नु भएको हो । उहाँ का दुई छोरा र एक छोरी छन् । करिब १७ वर्षसम्म शिक्षण पेसामा जोडिई त्यसपछि शिक्षातर्फको निजामति सेवा प्रा.वि.नि. पदमा कार्यरत रही २०५२ सालमा सेवानिवृत्त हुनुभएको थियो । उहाँ जिल्लाबाटै पहिलो एस.एल.सी. गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहन्छ । र त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट आइ.एड. उत्तीर्ण गरी त्यो समयका उच्च शिक्ष्ााँ हासिल गर्ने व्यक्तिमध्येमा पर्नुहुन्छ ।
शालीन, भद्र, उच्च मनोबल, कोमल हृदयी, क्षमतावान् र सकारात्मक सोचका धनी हुनुहुन्छ । आफ्नो जीवनका धेरै ऊर्जाहरु रुकुम जिल्लाकै शैक्षिक क्षेत्रमा खर्चनु भएको थियो । हालको यमुनानन्द नमुना मा.वि.सेरीगाउँको संस्थापक प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी निभाउँदै विद्यालयलाई नेपाल सरकारबाट स्थायी स्वकृति बनाउने, नमुना बनाउने र प्रा.वि.बाट स्तरोन्नति गरी नि.मा.वि. तहको विद्यालय बनाउनमा उहाँको महत्वपूर्णं हात रहेको छ । वि.सं. २०२५ साल तत्कालीन रुकुम जिल्लाका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य धु्रबविक्रम शाहको सहयोग लिँदै नि.मा.वि.लाई समेत नमुना विद्यालयमा परिणत गरी नेपाल सरकारबाट पचपन्न हजार रुपैँया पुरस्कार प्राप्त गराउनमा उहाँको योगदान महत्वपूर्ण मानिन्छ । प्रा.वि.नि. पदमा कार्यरत रहँदा कार्यालयको अभिलेखीकरण गर्नमा शिक्षा ऐन, नियम र नीतिगत कुरालाई कार्यान्वयन गराउने कुरामा उहाँ सधैँ लागिपर्नु हून्थ्यो । उहाँ कुनै मोलाहिजा मा पर्नु हुँदैनथ्यो । रुकुम जिल्लाकाविद्यालयहरुका निरीक्षण भ्रमणका सिलसिलामा देखिएका विद्यालयका कमी कमजोरीहरु औल्याउँदै आवश्यक सल्लाह सुझाब र निर्देशन दिने र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेमा उहाँ सधैँ लाग्ने गर्नुहुन्थ्यो । उहाँ जिल्लाकै शैक्षिक अभियन्ताका रुपमा पनि चिनिनु हुन्छ ।
घर परिवारमा उहाँकी जेठी दिदी हाल एकसय वर्ष पुग्दा पनि पत्रपत्रिका पढ्ने, धार्मिक पुस्तकहरु पढ्ने गर्नुहुन्छ भने माइला भाइ कुलराज शर्मा यमुनानन्द नमुना मा.वि. शिक्षण गर्दै प्र.अ. समेत भएको कान्छा भाइ इन्द्रलाल शर्मा प्राध्यापन कार्यमा संलग्न हुँदै सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुख, त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा क्याम्पसको अभ्यास शिक्षण प्रमुख भई हाल सेवा निवृत्त हुनुहुन्छ भने उहाँका जेठा छोरा डा.केशव शर्मा विद्यावारिधि गरी जिल्लाकै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये पर्नुहुन्छ । उहाँ हाल अष्ट्रेलिया बस्दै आउनु भएको छ । कान्छा छोरा दामोदर शर्मा नेपाल सरकारका सेवा निवृत्त कर्मचारी हुनुहुन्छ । छोरी पनि शिक्षित महिलामध्ये पर्नुहुन्छ । घर परिवारलाई शिक्षित र दीक्षित बनाउने कार्यमा उहाँको योगदान अनुकरणीय रहेको छ । गाउँ समाज इष्टमित्र सबैलाई शिक्षा हासिल गर्नमा प्रेरित गर्ने, उहाँको अभिप्रेरणामा भान्जाभान्जी, इष्टमित्र लगायत सबैले जागिरी खाने काम गरेको बुझिन्छ । समाजका दलित, महिला, जनजातिका मानिसहरुलाई हरेक कुरामा अगाडि ल्याउने काम समेतमा लागि पर्नुहुन्थ्यो ।
काम र कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने, सबैको भलो चाहने, आफ्नो पहिचान र नजिकका व्यक्तिहरुसँग निरन्तर सामाजिक सञ्जालमा जोडिने, विज्ञान प्रविधि र सूचना सञ्चारमा चासो दिइरहने, गाउँघरका व्यवहारिक, घरायसी कार्यमा सहजीकरण गर्ने, विवाहवारीका लागि पनि सहजीकरण गर्ने, खानपान, रहनसहन र धर्म संस्कृतिप्रति दिलचस्पी राख्ने, सामाजिक गलत संस्कृतिप्रति आवाज उठाउने, जातपातको भेदभाव नराख्ने जस्तो विलक्षण क्षमता उहाँमा पाउन सकिन्छ । हाल साढे आठ दशक पार गरिसक्दा पनि आफ्नो दैनिकी क्रियाशीलतामा कमी नभएका मध्येमा पर्नुहुन्छ । भने उहाँ अहिले श्वासप्रश्वास, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता दीर्घकालीन रोगबाट पीडित भई शारीरिक रुपमा अस्वस्थ भए पनि उहाँको बौद्धिकतामा भने कत्ति पनि कमी छैन । आफूलाई लागेको कुरा स्पष्ट राख्ने, कार्यान्वयन गराउनमा पछि नपर्ने उहाँको स्वभाव छ भने दाहाल वंशावली प्रकाशन गरेर आफ्नो वंशको इतिहास सुरक्षित समेत गरिसक्नु भएको छ । हाल रुकुम जिल्लाको ऐतिहासिकता झल्कने जिल्लाकै स्रोत ग्रन्थको रुपमा रहन सक्ने महत्वपूर्ण दस्तावेजीय पुस्तक प्रकाशन गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ ।
अन्तमा यमुनानन्द नमुना माध्यमिक विद्यालय सेरीगाउँको संस्थापक प्रधानाध्यापक शिवकुमार शर्मा यस विद्यालयको अनुकरणीय र आदर्श व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले सिँगारेको यस नमुना विद्यालयमा विगत २०५५ सालदेखि हालसम्म निरन्तर प्रधानाध्यापक हुन पाएकामा आफूलाई गौरवशाली महसुस गरेको छु । यस पदमा बसेर मैले उहाँका अमूल्य कदमहरुको स्मरण गर्न पाउनुमा आफूलाई भाग्यमानी पनि ठान्दछु । उहाँको शोधखोज र अन्वेषण कार्यले रुकुम जिल्लाको इतिहास रङ्गिन हुन सकोस् । उहाँलाई स्वास्थ्यले साथ देओस्, क्षमताको प्रष्फुटनमा कमी नआओस् । उहाँको जीवनबाट हामीले रुकुमको सकल इतिहासलाई बुझ्ने अवसर पाइरहौँ । पछिल्लो पुस्ताले उहाँको ज्ञान, विवेक र क्षमताको चुलीलाई टेकेर अगाडि बढ्ने अवसर पाओस् शुभकामना ।
पौडेल रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिका ५ को यमुना नन्द नमुना माध्यमिक विद्यालयको प्रध्यानाध्यापक हुनुहुन्छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २१, २०७८, १७:०९:००
कृषिमा व्यवशायिक बन्न संघर्षरत खड्का मंगलबार, माघ ४, २०७८
बिद्यालयमा औंलामा किताब घुमाउने रहरले बनेका तीन विश्व रेकर्ड शनिबार, असोज ९, २०७८
सी डिभिजन लिग फुटबल खेल्ने कुश्माकरको सपना बिहीबार, भदौ १०, २०७८
भ्यागुता र मानिसको सम्बन्ध बुधबार, साउन २७, २०७८
जसले संक्रमित हुँदा पनि काम छाडेनन् ...... शुक्रबार, असार ११, २०७८
वातावरणमैत्री विकासमा ध्यान दिने कि ? आइतबार, जेठ २३, २०७८